नेपाललार्इ भारतमा गाभ्नुपर्छ भनी बिबिसीले चलाएको अभियान, यस्तो छ प्रमाण सहित - Muldhar Post
नेपाललार्इ भारतमा गाभ्नुपर्छ भनी बिबिसीले चलाएको अभियान, यस्तो छ प्रमाण सहित
मूलधार सम्वादाता २०७४, ७ मंसिर बिहीबार 309 पटक हेरिएको
नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने अभियान बीबीसीले चलाएको कुरा बेलामौकामा चर्चामा आउने गर्छ। अहिले खासगरी बीबीसीका एक पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको चुनावी अभियानका क्रममा पनि यो विषय उठाइएको छ। के साँच्चिकै बीबीसीले यस्तो कार्यक्रम वा अभियान चलाएको थियो? कि यो हल्लामात्र हो? आउनुस् तथ्यका आधारमा सत्य खोजौँ।
हल्लामात्रै हो ?
हैन। आश्चर्य लाग्न सक्छ तर बीबीसीले नेपाललाई भारतमा गाभ्दा कसो होला भन्ने आशयको प्रश्न स्रोतालाई सोधेकै थियो। के भएको थियो त त्यतिबेला? आउनुस् विस्तृत जानकारी बुझौँ।
कुरा सन् २००० को हो। अर्थात् विक्रम संवत् २०५७ साल। बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस (नेपाली सेवा हैन विश्व सेवा)को साउथ एसियन डिबेट्स (दक्षिण एसियाली बहस) मा बीबीसीले एउटा प्रश्न राखी स्रोताहरुबाट त्यसको जवाफ माग गर्थ्यो। जवाफलाई रेडियोमा पढेर सुनाइन्थ्यो र अनलाइनमा पनि राखिन्थ्यो।
सन् २००० को सेप्टेम्बरमा बीबीसीले बहसका लागि एउटा प्रश्न राख्यो- नेपाल गरिब, अविकसित राष्ट्रका रुपमा रहेको छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुमा भन्दा यहाँ परिवर्तन निकै ढिला भएको छ। भाषा, संस्कृति र धर्म लगायतका विषयमा निकै समानता जब छ भने नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्दा अझ राम्रो होला?
म आफैले यो विषय रेडियोमा सुनेको थिएँ। त्यतिबेला प्रयोग गरिएको शब्द Security Umbrella थियो। तर त्यसको भाव भने भारतसित गाभ्ने भन्ने नै थियो। प्रश्नमा के नेपाल सर्भाइभ गर्न सक्छ र सर्भाइभ हुनुपर्छ त भनेर समेत सोधिएको थियो। अचम्म लागेको थियो एउटा सार्वभौम सम्पन्न देशका विषयमा बीबीसीलाई किन यस्तो बहस चलाउनु परेको होला?
त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनी सरकार चलाइरहेका थिए। बीबीसीको यो रवैयाको त्यतिबेला चर्को विरोध भएको थियो। त्यतिबेला बीबीसी नेपाली सेवातर्फ भने खगेन्द्र नेपाली प्रमुख थिए। नेपाली सेवातिर यो विषयमा के बज्यो खासै याद छैन मलाई। रवीन्द्र मिश्रले सन् १९९५ मा बीबीसी नेपाली सेवाबाट त्यहाँ जागिर सुरु गरे पनि पछि अङ्ग्रेजी भाषाका कार्यक्रमहरु वर्ल्ड टुडे र न्युज आवरमा र पछि बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस न्युजरुममा काम गरेको बीबीसीकै प्रेस अफिसको प्रेस रिलिजमा उल्लेख छ। यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
यो आपत्तिजनक प्रश्न वर्ल्ड टुडेकै कार्यक्रममा राखिएको थियो।
चर्को विरोध भएपछि बीबीसीले यो प्रश्नलाई परिवर्तन गर्‍यो। Security Umbrella शब्द हटाई Closer ties अर्थात् भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने बनाइयो। यो संशोधित प्रश्न र त्यसमा आएका जवाफ अझै पनि बीबीसीको अर्काइभमा हेर्न सकिन्छ।
जवाफहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् केही जवाफमा Security Umbrella शब्दहरु पनि छन्।
ओरिजिनल प्रश्न भने यस्तो थियो-
यसको लिङ्क थियो यो अहिले भने यसमा क्लिक गर्दा संशोधित पेज नै देखाउँछ। साभार माईसंसार